အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်ကိုဘယ်လို: သိပ္ပံအပေါ်အခြေခံပြီး3ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ, – Health Deo
သငျသညျသံ willpower ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုသင်လျင်မြန်စွာသောဤအစီအစဉ်များအပေါ်အရှုံးမပေးစေပါလိမ့်မယ်။
သကြားနဲ့ကစီဓါတ်အပေါ် 1. ဖြတ်သို့ပြန်သွားရန်
အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြားနှင့်ကစီဓါတ် (carbs) ရက်နေ့မှာပြန်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်အစားစွမ်းအင်များအတွက် carbs ကိုမီးရှို့၏, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အဆီချွတ်နို့တိုက်ကျွေးမှုစတင်သည်။
carbs ဖြတ်တောက်၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်သင့်ရဲ့ကျောက်ကပ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကပိုလျှံဆိုဒီယမ်နှင့်ရေသွန်းလောင်းစေ, အင်ဆူလင်အဆင့်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်ဖောင်းများနှင့်မလိုအပ်သောရေအလေးချိန် (2, 3) လျော့နည်းစေသည်။
ဒါဟာလမ်းမစား၏ပထမသီတင်းပတ်အတွင်း 10 ပေါင် (တစ်ခါတစ်ရံထက်ပို), ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်ရေအလေးချိန်နှစ်ဦးစလုံးမှတက်ဆုံးရှုံးဖို့အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ carbs Cut နှင့်သင်အလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမပါဘဲနည်းပါးလာကယ်လိုရီစားရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , carbs ဖြတ်တောက် autopilot အပေါ်အဆီဆုံးရှုံးမှုတတ်၏။
သင့်ရဲ့အစားအစာကနေသကြားနဲ့ကစီဓါတ် (carbs) ကိုဖယ်ရှားခြင်း, သင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချသင့်ရဲ့အင်ဆူလင်အဆင့်ကိုလျှော့ချနှငျ့သငျငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်စေမည်။
2. ပရိုတိန်း, အဆီနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားပါ
ဤနည်း၌သင်တို့၏အစားအစာများတည်ဆောက်ခြင်းအလိုအလြောကျတစ်နေ့လျှင် 20-50 ဂရမ်၏အကြံပြုအကွာအဝေးသို့သင့်ရဲ့ carb စားသုံးမှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ: မုန်, ရောက်ရေချိုငါး, ပုစွန်, etc
အသား: စသည်တို့ကိုအမဲသား, ကြက်သား, ဝက်သား, သိုးသငယ်,
ပရိုတိန်းများများစားခြင်း၏အရေးပါမှုကို overstated မရနိုင်ပါ။
ဤသည်တစ်နေ့လျှင် 80 မှ 100 ကယ်လိုရီများကဇီဝြဖစ်မြှင့်တင်ရန်ပြသလျက်ရှိသည်။
high-ပရိုတိန်းအစားအစာကိုလည်း 60% အားဖြင့်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမတရားသောနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအတွေးများကိုလျှော့ချထက်ဝက်အားဖြင့်နှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့်ရေစာများအတွက်အလိုဆန္ဒကိုလျှော့ချ, သင်အလိုအလြောကျတစ်နေ့လျှင် 441 နည်းပါးလာကယ်လိုရီစားသောသင်တို့သည်ဤမျှအပြည့်အဝပါစေနိုင်သည် – ကိုယ့်အစားအသောက်များတွင်ပရိုတိန်းဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ။
ဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှကြွလာသောအခါ, ပရိုတိန်းအာဟာရလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ ကာလ။
ဤအနိမ့် carb ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သင်၏ပန်းကန် load လုပ်ဖို့မကြောက်ပါနှင့်။ သငျသညျတစ်နေ့လျှင် 20-50 အသားတင် carbs ကျော်သွားစရာမလိုဘဲသူတို့ထဲကကြီးမားတဲ့ပမာဏကိုစားနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်အသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကအစားအစာကိုသင်ကျန်းမာရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိသမျှကိုဖိုင်ဘာ, ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ပါရှိသည်။
တစ်နေ့လျှင် 2-3 အစားအစာများကိုစားကြလော့။ သငျသညျနေ့လည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်ရှာတွေ့ပါက, 4th မုန့်ညက်ထည့်ပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာအနိမ့်-carb နှင့်အနိမ့်အဆီနှစ်မျိုးလုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပျက်ကွက်များအတွက်စာရွက်သည်အတိုင်း, အဆီမစားမကြောက်ပါနှင့်။ ဒါဟာသင်စိတ်ဆင်းရဲခံစားရပါစေနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏အစားအစာများကိုစုဝေးနိုငျပုံကိုကြည့်ဖို့, ဒီအနိမ့်-carb မုန့်ညက်အစီအစဉ်နှင့် 101 ကျန်းမာတဲ့အနိမ့်-carb ချက်ပြုတ်နည်းများ၏ဤစာရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။
ပရိုတိန်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဆီအရင်းအမြစ်နှင့်အနိမ့်-carb ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထဲကတစ်ဦးချင်းစီမုန့်ညက်, စည်းဝေး။ ဒါဟာ 20-50 ဂရမ် carb အကွာအဝေး၌သငျထားသိသိသာသာသင့်ရဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအဆင့်ဆင့်လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
3. ကြွအလေးချိန်3Times က Per အပတ်
အကောင်းဆုံး option ကိုအားကစားခန်းမမှ 3-4 ကြိမ်တစ်ပါတ်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပူနွေး-Up လုပ်ပါနှင့်အချို့သောအလေးရုတ်သိမ်းပေးရန်။
အလေးရုတ်သိမ်းရေးသင်တို့အဘို့တစ်ခု option ကိုမဟုတ်ပါဘူးလိုလျှင်, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေး, ပြေး, စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ရေကူးများကဲ့သို့အချို့သော cardio လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေလောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအလေးချိန်ရုတ်သိမ်းတူသောခုခံလေ့ကျင့်ရေးအချို့ကိုမျိုးလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခု option ကိုမပါရှိလျှင်, cardio လေ့ကျင့်ခန်းလည်းထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။
optional – Per အပတ်ပြီးတာနဲ့တစ်ဦး “Carb Refeed” လုပ်ပါ
သင်ပိုမို carbs ကိုစားရှိရာအရပ်၌သင်တို့တစ်ပတ်ကိုတနေ့ချွတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာစနေနေ့ကြိုက်တတ်တဲ့။
စသည်တို့ကို Oats, ဆန်, quinoa, အာလူး, ချိုမြိန်အာလူး, အသီးကဲ့သို့ကျန်းမာ carb သတင်းရပ်ကွက်မှကပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်
သို့သော်သာဒီတစ်ခုပိုမိုမြင့်မား carb နေ့က – သင်တစ်ပတ်ကိုပိုပြီးမကြာခဏတစ်ကြိမ်ထက်ကလုပ်နေတာ start လျှင်သင်ဒီအစီအစဉ်အပေါ်အများကြီးအောင်မြင်မှုကြည့်ဖို့မသွားပါတယ်။
သင်တစ်ဦး cheat မုန့်ညက်ရှိသည်နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုစားရကြမည်ဆိုပါက, သို့ဖြစ်လျှင်ဤနေ့၌ထိုသို့ပြုကြ၏။
cheat အစားအစာများသို့မဟုတ် carb refeeds လိုအပ်သောမဟုတ်ပါဖြစ်ကြောင်းသတိထားပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ leptin နှင့်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများကဲ့သို့အချို့သောအဆီ-ကိုမီးရှို့ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ refeed တစ်နေ့တာအတွင်းအချို့သောအလေးချိန်ရရှိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအများစုရေအလေးချိန်ရှိလိမ့်မည်, သင်လာမည့် 1-2 ရက်အတွင်းပြန်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
မလိုအပ်ပေမယ့်တစ်နေ့မှာသင်ပိုမို carbs ကိုစားရှိရာအပတ်တိုင်းရှိခြင်း, ဿုံလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကအရမ်းနိမ့်သည့် carbs စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပရိုတိန်း, အဆီနှင့်အနိမ့် carb ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကပ်အဖြစ်ကယ်လိုရီရေတွက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါ, အဲဒီနောက်ဒါမှမဟုတ် “Fast ကိုယ်အလေးချိန်” အပိုင်း “ကိုယ်အလေးချိန်” တစ်ခုခုကနေနံပါတ်တစ်ခုကောက် – သင်ကိုယ်အလေးချိန်ချင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်ပေါ် မူတည်. ။
သင်အစာစားနေကြသည်ကယ်လိုရီများ၏အရေအတွက်ကိုခြေရာခံဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်အများကြီးကြီးမြတ်ရေးကိရိယာများရှိပါသည်။ ဤတွင်အခမဲ့သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ကြောင်း5ကယ်လိုရီကောင်တာများစာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဤအစီအစဉ်၏အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်နေ့လျှင် 20-50 ဂရမ်အောက်မှာ carbs စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်နဲ့အဆီကနေသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီ၏ကျန်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုအပေါ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကယ်လိုရီရေတွက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာတင်းကြပ်စွာ 20-50 ဂရမ်အကွာအဝေး၌သင်တို့၏ carbs စောင့်ရှောက်ဖို့အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
10 အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုသိကောင်းစရာများအရာပိုလွယ် (နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်) Make မှ
ဤတွင်ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ကိုယ်အလေးချိန် 10 ထက်ပိုသောအကြံပေးချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
ညစဉ်ညတိုင်း, ကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုရယူပါ။ ညံ့ဖျင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးအန္တရာယ်အချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအရေးကြီးပါသည်။
သင့်ရဲ့အစားအစာကိုဖြည်းဖြည်းစားပါ။ အစာရှောင်ခြင်းစားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးအလေးခြိနျရဖို့။ ဖြည်းဖြည်းချင်းစားခြင်းသင်ပိုမိုပြည့်အဝခံစားမိစေသည်နှင့်အလေးချိန်-လျှော့ချဟော်မုန်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်သောက်ပါ။ သင်တစ်ဦးကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်သောက်နေလျှင်, ထိုကဖိန်းဓာတ်သကဲ့သို့သငျလိုခငျြသလောက်သောက်ရသူတို့အထဲ၌ 3-11% အားဖြင့်သင့်ဇီဝြဖစ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်-ဖော်ရွေအစားအစာများ (စာရင်းကိုကြည့်ပါ) ကိုရွေးချယ်ပါ။ အခြို့သောအစားအစာများကိုအဆီဆုံးရှုံးများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဤတွင်မွကွေီးပျေါမှာ 20 အရှိဆုံးကိုယ်အလေးချိန်-ဖော်ရွေအစားအစာများစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
sugary အချိုရည်နှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုရှောင်ပါ။ ဤရွေ့ကားသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့သွင်းထားနိုင်ပါတယ်အရှိဆုံးဆူအောင်ကျွေးသောအမှုအရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကိုရှောင်ရှားသင်ကကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်မတိုင်မီရေတစ်ဝက်နာရီသောက်ပါ။ လေ့လာမှုတစ်ခုတစ်နှစ်ခွဲနာရီအစားအစာများမတိုင်မီသောက်ရေ3လကျော်က 44% အားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ပျော်ဝင်အမျှင်ဓာတ်ကိုစားကြလော့။ လေ့လာရေးပျော်ဝင်အမျှင်အထူးသဖြင့်ဝမ်းဧရိယာထဲမှာအဆီလျှော့ချစေခြင်းငှါပြသပါ။ glucomannan တူသောဖိုင်ဘာဖြည့်စွက်လည်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အများအားဖြင့်တပြင်လုံးကို, unprocessed အစားအစာများကိုစားပါ။ မြေတပြင်လုံးအစားအစာများအပေါ် base သင့်ရဲ့အစားအသောက်အများစု။ သူတို့ကကျန်းမာသန်စွမ်းကိုပိုအဆာများနှင့်ကျော်စေအများကြီးလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်အလေးချိန်။ လေ့လာရေးနေ့တိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုချိန်သူတွေကိုပိုပြီးကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ (28, 29) ထိုသို့ပယ်စောင့်ရှောက်ဖို့များပါတယ်ဖော်ပြသည်။
ဤနေရာတွင် ပို. ပင်အကြံပေးချက်များ: 30 လွယ်ကူနည်းလမ်းများသဘာဝ (သိပ္ပံကပံ့ပိုးထားပြီး) ကိုယ်အလေးချိန်ရန်။
ဘယ်လိုအမြန်သင်ကဆုံးရှုံးနေ (နှင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ) လိမ့်မည်